पोखराको काहू डाडामा बट्टाई पालन ! मासिक ११ लाख आम्दानी…… – Info Bazar
पोखराको काहू डाडामा बट्टाई पालन ! मासिक ११ लाख आम्दानी……
February 5, 2020by Info Baazaar0 comments
पोखरा- अहिले बट्टाई चराको बजार पोखरा लगाएत देशका विभिन्न स्थानमा राम्रो छ । कृषकले यो पालनबाट पनि राम्रो आम्दानी लिईरहेका छन ।पाल्न पनि सजिलो र तेती सारो सुसार पनि गर्न नपर्ने भएकाले कृषकहरु यसमा आकर्षित छन ।
१८ वर्ष सम्म विभिन्न कम्पनीहरुमा मार्केटिङ जागिर गरेर आफ्नै केही गर्ने सोच गरेका युवा व्यवसायी हुन राजु भण्डारी क्षेत्री । जो अहिले पोखरा २१ काहू डाडामा व्यवसायीक बट्टाई पालन गरी एक उदाहरण बनेका छन । यसै क्रममा उहाको अनुभव ………………………
बट्टाई पालन गर्ने सोच कहाँबाट आयो ?
पहिला मैले थुप्रै मल्टिनेशनल कम्पनीहरुमा रिजनल सेल्स म्यानेजर देखी कन्ट्री सेल्स म्यानेजरको रुपमा १८ बर्ष सम्म काम गरे । लामो समय मार्केटिङ क्षेत्रमा काम गरेपछी आफ्नै पनि सुरु गरौ केही भनेर बट्टाई पालन तिर बुझे । नेपालको हकमा सस्तो अनि चाडै उत्पादन र व्यापार हुने व्यवसाय यही देखे पछी यही पेशा व्यवसायलाई अपनाए ।
कति लगानी गरेर सुरु गर्नु भयो ?
मैले २०६८ सालवाट यो व्यवसाय अपनाएको हु यानिकी अहिले सम्म ८ वर्ष पुगेछ । मैले सुरुमा बट्टाई सँगै विभिन्न जातका कुखुराहरु , अनि खोर निर्माण ह्याचिंङ मेशिन गरी सवै गर्दा ७५ लाख रुपैया जति लगानी गरे ।
दैनिक कति उत्पादन ?
अहिले २ करोड भन्दा माथीको लगानी छ । हामीले दैनिक २ हजार देखी ५ हजार सम्म अण्डा उत्पादन हुन्छ । बजार राम्रो छ पहिला निकै गाह्रो थियो । बजार मार्केट खोज्नु पर्ने थियो तर अहिले अतिनै राम्रो छ । स्थानीय बजारमा अण्डा अनि बट्टाईको ज्यादै बढी माग छ । हामीले अहिले गण्डकी प्रदेश भारी गोरखा लमजुंग तनहु स्याङ्जा पोखरा लगाएत चितवन बुटवल देखी लिएर सुर्खेत सम्म हामीले पुर्याउदै आएका छौ ।
पालनमा समस्या ?
च्ररा हो फुसकियो भने उडेर जान्छ नत्र यसलाई तेती सारो हेरचाह गरिरहनु पर्दैन । बिहान एक चरण दानापानी अनि बेलुका एक पल्ट दाना पानी दिएपछी अरु केही गर्नु पर्दैन । दिउसो २ बजे देखी ५ बजे देखेको समय यिनीहरुको अण्डा पार्ने समय हो ।
कसरी बेच्नु हुन्छ ?
दुई हप्ता यानिकी १४ दिन पुगेको चल्लालाई हामीले १२० रुपैया गोटाको हिसाबले बेच्छौ । ठूलो बट्टाईलाई २२० देखी २५० रुपैयाको दरले बेच्दै आएका छौ । अण्डा भने हामीले ३२० देखी ३५० प्रति क्यारेटको दरले बेच्दै आएका छौ ।
दैनिक कति कामदार परिचालित छन ?
अहिले मा सँगै गरी ११ जना यसैको लागी खटिएका छौ । मासिक हामीले उत्पादन गरेको चल्ला र अण्डाबाट ११ देखी १२ लाख सम्म आम्दानी हुदै आएको छ र ६ लाख जती तलव दाना पानी अन्यमा खर्च पनि हुन्छ आम्दानी र खर्चलाई मिलाएर हेर्दा मासिक ५ लाख जती बचत हुन आउंछ ।
मासु र अन्डा सेवन गर्दाको फाइदा ?
यसको मासु र अण्डा आफैमा जिनेट हो । यसले धेरै हिटीङ पैदा पनि गर्छ .चिसो लाग्ने मानिसहरुलाई झन्य यो निकै उपयोगी छ । मानसिक तथा यौन क्षमता वृद्धि गर्नुका साथै छालासम्बन्धी समस्या, मधुमेह, वायुविकार, मृगौलाको पथरीका रोगीहरूले प्रयोग गरेको निकै राम्रो हुन्छ । दम, युरिक एसिड, मुटुरोग, बाथ रोग र हाडजोर्नीको समस्या भएका बिरामीका लागि बट्टाईको मासु लाभदायक हुन्छ । यसको अण्डा बालबालिकाकाे शारीरिक वृद्धि विकासका लागि निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । सुत्केरी महिला गर्ववती महिला ,प्रेसर अलि बढी हुने बिरामीले मासु नखाएको राम्रो ।
बट्टाई पालनबाट आम किसानले के के फाइदा लिन सक्छन त ?
बट्टाई पालन आर्थिक तथा स्वास्थ्यका हिसाबले निकै नै उपयोगी पालन हो । यिनीहरु संग रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता धेरै नै हुने भएकाले औषधि खर्च न्यून हुन्छ । पन्छी पालनमा ७० प्रतिशत लगानी दानामा लागे तापनि यसमा दानामा लागत खर्च पनि निकै नै कम रहेको छ । जिउदो चराको १ रुपैया प्रति ग्राम पाइने यो चरा २८ दिन देखि बेच्न योग्य हुने र औसत तौल १५० ग्राम -२०० ग्राम सम्मको हुन्छ । बट्टाईले एक महिना पुगेपछी नै अन्डा दिन थाल्छ । यसका अन्डाहरु साना–साना भएता पनि पौस्टिक तत्वले भरिपुर्ण रहेका हुन्छन् । बजारमा एक अन्डा प्रति गोटा रु १० सम्म बिक्रि हुन्छ । प्रति बट्टाईबाट कम्तिमा पनि ५०-१०० रुपियासम्म नाफा लिन सकिने सम्भावना छ ।
This Page Total Views: 1,507
January 12, 2020by Info Baazaar
बट्टाई चरा पालनबाट थोरै लगानीमा धेरै आम्दानी लिन सकिन्छ : युवा व्यवसायी सन्तोष परियार